Liis gareyn: Waxyi Naqshadeynta iyo Cilmi-baarista Tartanka loogu talagalay Suuqgeeyayaasha Emailka | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 8, 2015 Khamiista, Noofembar 12, 2015 Douglas Karr
Liis garayn waxay u suuq geynayaan iyaga sidii Engine-ka Raadinta Wargeysyada Emailka, iyagoo muujiyey in ka badan 5 milyan oo joornaallo emayl raadin ah oo ka socda 400,000 Madbacad. Qalabka noocan oo kale ah ayaa u fiican naqshadeeyayaasha doonaya inay ka helaan dhiirrigelinta noocyada muhiimka ah ama kuwa dijitaalka dijitaalka ah ee doonaya inay arkaan marka tartamayaashu dirayaan iyo nooca joornaalada iyo heshiisyada la isweydaarsanayo.
Haddii aad tahay ganacsi aan haysan agabkii lagu tijaabin lahaa, qalabkani wuxuu si gaar ah waxtar u yeelan karaa maadaama madbacadaha waaweyn ay dadaal badan ku bixiyaan helitaanka emaylladooda si sax ah!
Liis garaynta ayaa leh astaamo iyo faa'iidooyin kooban:
Raadinta iyo Shaandhaynta Sare - Ku raadi mowduuc, magaca soo diraha, cinwaanka emaylka diraha, qoraalka jirka ama xitaa URL. Ku shaandhee taariikhda, darajada Alexa iyo xitaa midab.
Jaantusyada Isbeddellada Keyword - Muuji isbeddellada la socda jadwalkayaga jadwalka wadajirka ah, ka dibna ku dheji waqtiyada muhiimka ah iyo taariikhaha gaarka ah si aad u hesho aragti dhow.
Cuntada maalinlaha ah - Waqti badbaadi oo waligaa ha seegin olole leh iimayl maalinle ah ee ololeyaal cusub oo loogu talagalay noocyada aad jeceshahay.
Cusbooneysiinta waqtiga - Ololeyaal ayaa la heli karaa si loo baadho isla marka la diro, oo si joogto ah loo xajiyo.
Taageerada 24 / 7 - Waxay halkan joogaan markii aad u baahatid, haddii ay ahaan lahayd su'aal, warbixin cillad ama soo-jeedin shey.
Xitaa waxaad ka heli kartaa arimaheena hore ee la heli karo!
Notablist ayaa sidoo kale ku daray Pro, heer adeeg sare loo qaaday oo ku daraya:
Natiijooyinka raadinta waqtiga-dhabta ah - Isla markiiba olole yimaado, waa la raadin karaa. Intaa waxaa sii dheer, badhanka 'Live Updates' ee bogga natiijooyinka raadinta hadda wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si joogto ah ula socoto raadinta ad-hoc ee waxyaabaha cusub ee imanaya.
Dashboard toos ah - Calaamadeynta raadintaada aad jeceshahay waa hab fiican oo aad waxyaalaha dusheeda ku joogi karto, laakiin miyay fiicnaan lahayd inaad dhammaantood hal meel ku wada aragtid? Dashboardka tooska ah ayaa sidaas sameeya: wuxuu isku daraa natiijooyinka dhammaan calaamadahaaga hal aragti waqti oo si joogto ah u cusbooneysiiya markay walxaha cusub yimaadaan. Ka fikir sida quudin Twitter ah oo loogu talagalay ololayaasha joornaalada aad xiiseyneyso.
Digniinta emaylka-waqtiga-dhabta ah - Waxyaabaha qaarkood ma sugi karaan. Ka sii muhiimsan, waxyaabaha qaar lama seegi karo. Digniinta-waqtiga dhabta ah, waxaad ku heli kartaa emayl dagdag ah markii olole cusub u yimaado mid ka mid ah calaamadahaaga.
Qalabka shaxda - Natiijooyinka raadinta mar horeba waxaa ku jira jaantusyo dhalaalaya oo muujinaya isbeddellada 90-maalmood ee shuruudahaaga raadinta. Laakiin inta badan waa muhiim in la isbarbardhigo ereyo badan si loo arko waxa socda iyo waxa hoos u dhacaya, ama xitaa midka dhexdooda ugu caansan. Qalabka indha-indheynta, waad sameyn kartaa taas oo waxaad u arki kartaa natiijooyinka sida jaantusyada ama jaantusyada kalluunka.
Tags: raadinta emaylka tartankacilmi baarisemailemail ugu dir hababka ugu fiicankeydka macluumaadkanaqshadeynta emaylkatusaalooyinka emaylkamashiinka raadinta emaylkaimtixaanka emaylkawarsidahaNaqshadeynta warsidahawarsidaha dhiirigelintaliis garayn
Waad Qaldantahay, Waa kuwan 4 Sababood oo Warbaahinta Bulshadu Saameyn ugu yeelato SEO